Ndinoshandisa sei keyword kutsvaga Amazon maitiro nenzira yakarurama?
Mazuva ano, Amazon yakava zita remhuri rekutsvakwa kwezvigadzirwa paInternet. Uye munhu wose akasununguka kuedza kupedza chigadzirwa pamusoro payo - pamwe nevekupoteredza mamiriyoni makumi masere mamiriyoni vanoshingaira vanoshingaira vanofungidzirwa pamusoro apo iyo nyaya bedzi ndeyokuti zvamakagadzirwa nemhando yako inofanira kuonekwa neavo vanogona kutenga vatengi sezvavanokwanisa. Tichifunga kuti iyi nzvimbo huru yemakakiti ine maitiro ayo ehurumende yekutarisa ini ndinogona kutaura kuti inoshanda zvakafanana zvakafanana neyavo inowanikwa paIndaneti kutsvaga inozivikanwa nevashandisi pasi rose pasi kwemakumi maviri emakore (kare, neGoogle pachayo). pa). Ndokusaka ndichitenda kuti kiyi yekubudirira kwemazuva ano ecommerce entrepreneur kutengesa pamusoro pemidzi zvakanyatsobva kune keyword kutsvaga Amazon maitiro. Zvechokwadi, kune simba rakasimba rekutengesa richiri kudikanwa kuti rive guru guru-nguva mutengesi pane iyo yakazara purogiramu - winter hat styles. Kwete kutaura kuti haungambosviki nguva yako ichimhanya mukutsvaga mukukwikwidza kuti utungamirire. Kunyange zvakadaro, ndine chokwadi chekuti iko kwekugadzirwa kwekambani kugadzirisa chinhu ndicho chinhu chokutanga chaunofanira kuita pazvinosvika pakuwana kuwedzerwa kwakanaka kwekutsvaga paIndaneti. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kukuratidza muchidimbu kuti ungashandisa sei kutsvaga kutsvaga ma Amazon maitiro - uye rega kunze kwekukwikwidza mushure mezvose.
Nhamba 1: Mbeu Dhizha
Tanga neruzhinji rwemashoko ekutsvakurudza ma Amazon maitiro achingoisa chinangwa chako chikuru pakutsvaga kweGoogle. Nenzira iyo, uchawana mufananidzo wakazara wekuti vanhu vanogona kutsvaga sei zvinhu zvako. Zvadaro, funga nezvemisi-misi mikuru mazwi uye misungo yakananga yakabatana necheki yako. Panguva imwecheteyo, inenge iri chigadziro chakanaka chekuongorora vashambadzi vatungamiri vanoita bhizinesi rekutumira-bhizimisi kwemakore. Pano ndipo apo ose aya akashandiswa pakugadzirisa zvishandiso uye makambani epakombiyuta anotanga kupinda.
Nhanho yako inotevera ndiko kusarudza chakakosha chinyorwa chekutsvakira maAmerica zvinhu. Nenzira, kune mhando dzakasiyana-siyana dzakasarudzwa, zhinji dzadzo dzinowanikwa mukusununguka. Ichokwadi kuti vamwe vavo vanobhadhara-vanosvika chete, asi kuchine vakawanda vane vatsigiri vakanaka uye vakavimbika vasina kubhadhara peneni. Mushure mezvose, hazvina-brainer uye zviri kwauri kuti uone chisarudzo chipi zvacho chaunosarudza - chaizvoizvo vazhinji vavo vakagadzirwa kunyanya nekuda kwekutsvaga mazwi kuti vakupe mazano ekukwikwidza ekupedzisira.
Nhamba yechitatu: Kuongorora maitiro
Uye pano tava kusvika pakupedzisira. Chinhu ndechekuti kana uchishandisa izwi rinokosha rekutsvaga Amazon maitiro iwe unogona kunge wakanyanyogadzikana nezviuru zvezvivimbiso zvemashoko makuru. Saka, chinetso chikuru ndechokusarudza kuti ndezvipi zvakakodzera chaizvo uye zvakakodzera kuti zviwanikwe mukutsvaga kwako. Nenzira iyo, iva nechokwadi chekubhadhara kunyatsonyatsotarisa kumatricriki makuru anotevera:
Tsvaga izwi - metric metric inoratidza kuti vanhu vangani nenyika vakashandisa izwi renyu mukukumbira kwekutsvaga .
Kushandura - kunoratidza matarisiro akazara echinhu chikuru kuti aite magwara uye nguva dzose achishandisa vatengesi.
Kuoma - zvisinei, shoko guru rinonyanya kuoma, kuti iwe ufananidze kuwana mitsara inotsvaga yekutsvakurudza iyo inogona kutengesa mamwe magwagwa kune zvigadzirwa zvako.